Imnandi kwaye iyakhawuleza
Encyclopedia of ukutya ukulungiselela
Umbuzo: Kuthatha ixesha elingakanani ukubilisa iimbatyisi?
Uyipheka njani iimbatyisi emanzini abilayo? Beka isiqingatha se-oyster kwi-steamer ngamanzi abilayo. Gubungela kunye ne-steam imizuzu emi-5 ukuya kwe-8, ususa ii-oyster njengoko zivula. Lahla naziphi na iimbatyisi ezingavulwanga. Phinda nge oyster eseleyo. Zithatha ixesha elingakanani ukupheka iimbatyisi ekrwada? Yibilise ulwelo oluqhumayo emva koko...
Uyenza njani i-grill filet mignon medium enqabileyo?
Ndiyipheka ixesha elingakanani ifilet mignon kwigrill kunqabile okuphakathi? Sebenzisa la maxesha alandelayo obude begrill filet mignon ngokugrisa ngokuthe ngqo: Kwi-intshi ye-intshi yokusika, i-grill 1 ukuya kwi-10 imizuzu ye-medium-rare (12 ° F) okanye i-145 ukuya kwi-12 imizuzu ye-medium (15 ° F). Ukusika i-intshi e-160½, i-grill 1 ukuya kwi-15 imizuzu ...
Ngaba sinokusebenzisa ioli emva kokuqhotsa ngokunzulu?
Ngaba ioli eqhotsiweyo ingaphinda isetyenziswe? Ewe, ungaphinda uyisebenzise. Kodwa kukho imigaqo embalwa yokuphinda kusetyenziswe ioli eyonwabileyo. … Kuba ukuqhotsa kwenzeka kumaqondo obushushu aphezulu, sebenzisa i-oyile enendawo yokutshayela kakhulu engenakuqhekeka lula. Ezi ziquka i-canola, i-peanut, okanye ioli yemifuno. Ungayigcina ixesha elingakanani ioyile emva kokunzulu...
Ngaba uPam upheka ukutshiza uyatya?
Ingaba isitshizi sokupheka sikhuselekile ukuba singatyiwa? Ulawulo lokutya kunye neziyobisi (i-FDA) luchaze ukuba izitshizi zokupheka zikhuselekile ukuba zisetyenziswe. Ngaba uPam uyatyiwa? Izitshizi zethu ze-PAM ezingagungqiyo zidibana nazo zonke izikhokelo ze-FDA kunye ne-USDA. Xa i-PAM itshizwa, irhasi encinci, engeyongozi iqhubela isitshizi kwaye ikhawuleze ichithe, ishiya ioyile ...
Umbuzo wakho: Kuthatha ixesha elingakanani inkukhu ekrwada ukubhaka kwi-casserole?
Ngaba ungayipheka inkukhu ekrwada kwisitya se-casserole? Ndingayifaka inkukhu ekrwada kwi-casserole? … Ungasebenzisa ibele lenkukhu, amathanga enkukhu, okanye ngenene nayiphi inkukhu eshiyekileyo. Kukhuselekile ukusebenzisa inkukhu ekrwada njengoko zonke iibhaktheriya ziya kubulawa ngokukhawuleza ukuba isitya sifike kwi-160 ° F. Nangona kunjalo, kufuneka unyamezele…
Umbuzo: Ngaba akukho mthethweni ukubilisa iikreyifishi?
Ungakwazi ukukhenkcisa ukutya kwaselwandle okushiyekileyo kubilayo? Ngaba kulungile ukubilisa iikreyifishi? Nokuba ukupheka inyama yelobster akuyi kubulala zonke iibhaktheriya. Ngoko ke kukhuseleke ngakumbi ukugcina isilwanyana siphila ude usihambise. … Ngoko ukubilisa iikreyifishi ziphila kusisindisa kwihlabathi leentlungu, kodwa kuthekani ngeekreyifishi? …
Usigcina njani isiciko segrill kwi?
Ndisibeke nini isigqubuthelo kwigrill yam? Nangona kucetyiswa ukuba ube nesigqubuthelo se-grill yakho, akuyimfuneko ukugcina i-grill yakho igubungele i-24/7. Khawukhumbule ukunika i-grill yakho ngokufanelekileyo ukusula phantsi kanye ngenyanga, kwaye uyigubungele xa kuyimfuneko. Okukhona uzikhathalela ngakumbi…
Kufuneka zicoceke kangakanani iigrayiti zegrill?
Ngaba kufuneka ucoce iigridi zegrill? Coca ngamanzi ashushu, anesepha Khuhla kancinci iigrate zakho. Gxila emanzini anesepha iyure kwaye uhlambulule. Buyisela i-grates kwi-grill yakho, vala isiciko kwaye uyifudumeze. Emva kokufudumala, sebenzisa ibrashi yakho ye-grill ukuze uhlambe nayiphi na intsalela eyongezelelweyo kwi-grates. Kwenzekani …
Uyintoni umahluko phakathi kwe-Bakingsoda kunye ne-powder baking?
Ndingasebenzisa isoda yokubhaka endaweni yomgubo wokubhaka? Ngaba ndingatshintsha isoda yokubhaka endaweni yomgubo wokubhaka? Ewe, okoko nje kukho okwaneleyo kwesithako esine-acidic ukwenza ukusabela (kwi-1/2 ye-teaspoon yokubhaka i-soda, udinga i-1 ikomityi yebhotela okanye i-yogurt okanye i-1 ithispoon yejusi ye-lemon okanye iviniga). Oko ikukuthi …
Wazi njani ukuba ibhekoni ephekiweyo imbi?
Ungatya ibhega ngosuku olulandelayo? Ilungele ixesha elingakanani ibhakoni ephekwe ngokupheleleyo? Emva kokuba upheke ibhakoni, inokuhlala malunga neentsuku ezi-4 ukuya kwezi-5 efrijini. Ukuba awuzukwazi ukuyisebenzisa ngelo xesha, yimise. Ngaba ukupheka ibhakoni eyonakeleyo kuyenza ikhuseleke? UMayo…
Page1 Page2 ... Page785 Okulandelayo →
Ndiyabulisa. Ibhlog yam malunga nokupheka kunye neeresiphi onokuthi uziqhole kunye nokunye. Kwaye ndiyakuthanda kakhulu ukuzama ekhitshini kwaye ngenxa yoko, ukutya okumnandi okumnandi, iisaladi, iisosi zifunyenwe. Kwibhlog yam, unokufunda malunga nendlela yokulungiselela ukutya okuninzi: iisandwich, iisandwich, ii-canapes, iitartlets kunye nokunye. Joyina, kuya kuba nomdla.
© 2022 Imnandi kwaye iyakhawuleza